Cusbooneysii: Cuntooyinka gargaarka COVID-19 waxay ku sii socdaan dadka waaweyn ee 50+ - Cuntooyinka wheels-ka
Barnaamijyada Cunnada ee Magaalooyinka Mataanaha ah waxay sii wadi doonaan inay siiyaan COVID-19 cunno gargaar dadka waaweyn ee jira 50 +. Shaqsi kasta oo jira 50 ama ka weyn oo wajaha dhibaato xagga helitaanka cuntada wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo ilaa 7 cunto asbuucii iyada oo aan wax kharash ah ku bixin.
Haddii adiga ama qof aad taqaanid ka faa'iideysan karaan Cunnooyinka Lugaha, fadlan halkan iska qor si aad u bilawdo adeega ama aad naga soo wacdid 612-623-3363. Tilmaamahan maalgelinta gargaarka ee COVID-19 ee loogu tala galay Cunnada cusub ee qaatayaasha Wheels ayaa socon doona illaa iyo 31-ka Luulyo waana la beddeli karaa haddii gargaar dheeri ah oo dawladeed la helo. Cunnada qaatayaasha Wheels ee horay u soo qortay oo hadda qaata cunnooyinka gargaarka ayaa wali awoodi doona inay sidaas ku sameeyaan qiimo la'aan, iyadoo aan loo eegin da'da.
Barnaamijka gargaarka ee COVID-19 wuxuu siiyaa cunto shakhsiyaadka aan awoodin inay bixiyaan qiimaha buuxa ee cuntada isla markaana aan u qalmin barnaamijyada kale ee dowladda ee ka caawiya qiimaha cuntada guryaha lagu bixiyo. Ma jiraan da 'ama dakhliyada looga baahan yahay inaad iska diiwaangeliso Cuntada Lugaha - barnaamijyadan ayaa si fudud gacan uga geysanaya inay daboolaan qiimaha cuntada ee kuwa aan awoodin inay bixiyaan qiimaha buuxa.
Intii lagu gudajiray 2020, barnaamijyada Cunnooyinka Twin Cities on Wheels waxay awood u yeesheen inay cunno siiyaan qofkasta 18+ iyadoo ay ugu mahadcelinayaan hal mar oo ay maalgelisay sharciga Coronavirus Aid, Relief, iyo Security Security (CARES), oo dhacay dhammaadka 2020. Waan awoodnaa in la sii wado u adeegida COVID-19 cunnooyinka gargaarka iyadoo loo marayo deeqsinimada shakhsiyaadka ku deeqaya iyo taageerada aasaasiga ah.